Faraska cawl: jaakad, noocyo iyo astaamo. | Fardaha Noti
Si la mid ah sida ay ugu dhacdo Faraska Zaino, tordillo ama faraska cawl waa mid leh astaamo lagu garto oo lagu kala garto iyada oo aan loo eegin nooca kaas oo kalluunku iska leeyahay. Madaahibta "Thrush" wuxuu ka yimaadaa magaca shimbir midabkeedu u egyahay ku siman: cawlan oo leh dhibco cad siyaabo kala duwan.
La cape torda waa a aad loo qiimeeyo oo lagu qadariyo noocyada kala duwan ee sinnaanta. Fardaha cawl, Badanaa waxay ku dhashaan midab madow oo kala sii cadaanaaya waqtiga iyadoon loo eegin nooca dhogorta ay leedahay. Nidaamkani wuxuu sabab u yahay qaabka astaanta astaanta maqaarka miyaan wax yar ka ogaaneynaa nooca jaakadan sinnaanta?
Kahor intaanan sii wadin sharaxaadda sida fardaha cawlku yihiin, waxaan dooneynaa inaan wax yar ka sheegno fardaha jaakadani Haddii aad leedahay mid ka mid ah xayawaanadan quruxda badan, waxaa muhiim ah inaad tixgeliso hal dhinac oo ka mid ah caafimaadkooda, waana taas 75% tijaabooyinka cabeebka ee ka weyn shan iyo toban sano jirka ayaa ku dhaca melanomas aan fiicnayn. Xaaladaha qaarkood melanomaskan shar bay noqon karaan, sidaa darteedna waa inaan caqli galnaa xayawaankeenna.
Melanoma waa nooc ka mid ah kansarka fardaha cawlku yeeshaan qaab dhibco mugdi ah oo ku yaal meelaha aan dhogorta lahayn sida dabada. Xaaladaha fudud waxaa lagu daaweyn karaa boomaatada iyo antibiyootikada, in kastoo kiisaska ugu halista badan ay ku dambeeyaan nabarro waana in qalliin looga saaraa. Si aan loo gaadhin xaaladdan ama aan loo xaglin Waxaa muhiim ah in la qaato tallaabooyin ka hortag oo fudud sida ka-fogaanshaha in xayawaankeennu u nugul yahay qorraxda tooska ah inta lagu jiro saacadaha dhexe ee maalinta. Ka sokow daryeelka uu faras kasta u baahan yahay si uu u helo caafimaad wanaagsan, sida cunto fiican ama jimicsi marka loo eego nooca iyo da'da xayawaanka.
1 Dhogorta cirro
1.1 Wejiyada hawsha saxeexidda
1.1.1 Wejiga 1aad: Koodhka dillaacidda
1.1.2 Wajiga 2: Cadaadiska Fledgling
1.1.3 Marxaladda 3: Cadaadis Duudduuban oo Madow
1.1.4 Wejiga 5aad: Muscat riixis iyo atruitats
1.1.5 Marxaladda 6aad: Cawl ama Gargaar Cadaan
2 Noocyada faraska cawl
Dhinac khuseeya adduunyada salka ku haysa ayaa ah dhogorta (waxaa loo fahmay sida loo dhigay timaha jirka, manka iyo dabada) taas noo soo gudbin kara macluumaad muhiim ah oo ku saabsan xayawaanka sida cabirka caafimaadkaaga ama qiimeynta awooda aad ugu adeegi karto qofka aadanaha ah.
Eumelanin iyo pheomelanin waa laba midab oo ay sameeyeen melanocytes (unugyo ku xareysan maqaarka maqaarka oo sameeya midabbo siiya midabka maqaarka iyo timaha) sidaas darteed iyaga ayaa mas'uul ka ah cufnaanta mid kasta oo ka mid ah jaakadaha loo yaqaan 'equine'. Midka hore waa midab madow ama bunni ah, halka midka labaadna uu yahay casaan ama jaalle. Labaduba waxay abuuraan waxa loogu yeero codadka aasaasiga ah ee isku roga ficil ahaan isku mid ahaanta iyo mugdi madow Tiro badan oo is-beddelka ayaa ka soo jeeda iyaga marka hiddo-wadayaasha khafiifinta ee khafiifiya jaakadahaani ay ficil sameeyaan. La'aanta kuwan laba midab, midkood ama qayb ahaan, wuxuu abuuraa albinos iyo albinoids siday u kala horreeyaan. Hadda, maxaad ku tolaysay astaanta astaanta ee dhogorta cawl?
Wejiyada hawsha qoomiyada
Waxaan faallo ka bixinay bilowgii maqaalka, in fardaha cawlku badanaa ku dhashaan jaakad madow oo ifaysa. Iyadoo lagu xisaabtamayo geeddi-socodkan magac-bixinta, kaas oo maqaarka sinnaanta iyo midabaynta indhaha ayaan isbeddelin, waa la aasaasi karaa wejiyada iyadoo loo eegayo xilliga la helay jaakadda fardaha cawl:
Wejiga 1aad: Koodhka dillaacidda
Digaagga cirroolaha ayaa isaga la dhashay jaakad aasaasi ah oo caadi ah, badanaa midab madow, marka laga reebo waxyaabo dhif ah taasi waa la dhalan karaa leh weji casaan leh ama gebi ahaanba cad. Badanaa indhashareerka iyo hareeraha indhaha waxay muujinayaan dabeecadooda xoqitaan iyagoo ku soo bandhigaya timo cad meelahaas.
Wajiga 2: Cadaadiska Fledgling
Iyada oo la jaakada ugu horeysa ee daata qaar ka mid ah timo cad ayaa ka muuqda jirka. Kuwani way ka tiro badan yihiin madaxa, halka manka iyo dabadu ay ka sii caddaan karaan jidhka ama ka sii madow yihiin.
Wejiga 3aad: Kalluumeysiga La Rujiyay mugdi ah
Timaha cad waxay noqonayaan tiro badan oo leh laxanka isdabajooga ee kan hore kadib. Muuqda wada kooxaysiga iyo ka sameysanaya baro yar yar oo cad jaakadda dhulka taas oo inta badan mugdi ah. Dhibcuhu waxay noqon karaan kuwo qaab wareegsan oo cabbir ahaan aad u weyn. Dhibcuhu way ka soocan yihiin midba midka kale dhogor madow. Sidaa darteed madaahibta "guntin taayirrada lugaha leh".
Wejiga 4aad: Kalluumeysiga La Rujiyay nadiif ah
Marxaladdan timaha cad ayaa ugu badan marka la barbar dhigo kuwa madow, siinta Equine muuqaal cad. Kordhinta timaha cad ayaa sameeya xajmiga dhibcaha midabkan kordhi oo bilaw inaad ku milmaan ka tagida qaybaha timaha madow midba midka kale iyo, xaaladaha qaarkood, oo leh qaab wareegsan.
Wejiga 5aad: Muscat riixis iyo atruitats
Sii wad timo cad oo kordhay iyosidaas awgeed, hoos u dhigista timaha madow ilaa ay dhibco yaryar oo mugdi ah ka hadhaan. Waxaa loo yaqaan "muscat thrushes" haddii jaakadda salka ay madow tahay ama bunni tahay iyo "tordos atruitats" haddii jaakadda salka ay tahay laabta ama xabad.
Marxaladda 6aad: Cawl ama Gargaar Cadaan
Marxaladdan ugu dambeysa ee astaynta fardaha cawlan, dhogorta oo dhan (oo ay ku jiraan dabada iyo manka) noqo gabi ahaanba cad. Xaaladaha qaarkood waxoogaa yar oo gaar ah, dib-u-dhac ayaa dhici kara maxaa keenay kadib wejigan ugu dambeeya, iskudarkoodu waxay muujinayaan aagag midab leh markale.
Sida laga soo xigtay jinsiyada oo waxaa iska leh faraska cirwareerka, Waxaa laga yaabaa inay soo bandhigto kala duwanaansho wejiyada qoomiyada Fardaha Andalusian Thoroughbred ama fardo Lusitanian ayaa leh marxalad duuban oo aad u calaamadeysan Noocyada kale sida Carabta, waa wax iska caadi ah in wejigu uu noqdo mid aad u fudud ama aan jirin oo toos u aadaya muscat iyo atruitats.
Noocyada faraska cawl
Marka lagu daro magacyada kala duwan sida ku xusan wajiga depigmentation ee dhogorta faraska, waxaan ka heli karnaa noocyo kala duwan marka loo eego midabka jaakad fardaha cawl. Madaahibta qaar ka mid ah noocyadu waa isku mid oo waxay la xiriiraan wejiyada.
Cawl khafiifa, Waa mid leh timo madow oo qoorta, dhabarka iyo kuuskuus ah, kuna yaal dabool timo cad.
Aad u xanaaq badan Iyagu waa kuwa leh timo cad oo lagu rinjiyeeyay dhibco yaryar oo madow sida duqsiga. Kani waa mid ka mid ah jaakadaha ugu qadarinta badan gudahood noocyada kala riixanta.
Qalliinka qalin ama argenteado, wuxuu leeyahay timo cad oo dhalaalaya oo leh dhowr timo madow, taas oo siinaysa muuqaal dhalaalaya oo dhalaalaya sida lacagta lacagta la gubay. Marka jaakadan noocan oo kale ah ay wada xanuuneyso qoorta iyo qeybta sare ee madaxa, waxaa loo tixgeliyaa jaakad aad u fiican.
Cudurka doofaarka, Waa midka ay timahiisa madow ka badan yihiin kuwa cad.
Cabeebka la beddelay, Iyagu waa isleegyada ku yaal lakabka timo cad waxay leeyihiin, jirka oo dhan, oo ka dilaaca dhibco madow amar la'aan ama saami ahaan.
Cabeeb la duubay, Faraska waxaa loo sheegay in dhabarka iyo hakinkuba ay soo bandhigayaan baro waaweyn oo wareegsan oo timo ka madow kuwa kale intiisa kale.
Wadada buuxda ee maqaalka: Fardo Noti » kuwa kale » Fardaha fardaha » Faraska Cawl ama tordillo, waxyaabaha u gaarka ah jaakadiisa
Faraska Lusitano ama Fardo Bortuqiis, waa mid ka mid ah fardaha ugu da'da weyn adduunka